किन संसद सचिवालयले एमाले र राप्रपाकै पक्षमा संशोधन विधेयक अस्वीकृत गर्‍यो यस्तो छ गम्भीर रहस्य !! « Postpati – News For All
किन संसद सचिवालयले एमाले र राप्रपाकै पक्षमा संशोधन विधेयक अस्वीकृत गर्‍यो यस्तो छ गम्भीर रहस्य !!
काठमाडौं : सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच लामो खिचातानीपछि सोमबार संसद्मा मतदान प्रक्रियामा गएको संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको छ ।संसद्मा सोमबार साँझ भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ३४७ मत मात्रै परेको थियो । विधेयक पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ मतका लागि ४८ मत नपुगेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अस्वीकृत भएको घोषणा गरेकी थिइन् । विधेयकको विपक्षमा २०६ मत पर्‍यो । कुल ५९२ सांसदमध्ये मतदानको समयमा ५५३ जना मात्रै उपस्थित भएका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले कांग्रेसलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भन्ने लागेको र अरू दलको पनि स्वास्र्थ मिलेकाले विधेयक अस्वीकृत भएको तर्क गरे । ‘मधेसको मुद्दा कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर यसो गरिएको हो तर मधेसमा यो मुद्दा अझ मुखरित भएर आउँछ । यो आगामी चुनावले देखाउँछ’, उनले भने ।
राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले सरकारले आफ्नो दल विभाजन गराएको बदला आज संसद्मा सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक फेल गराएर लिएको धारणा व्यक्त गरे । संसद्मा प्रस्तुत हुने अन्य सामान्य विधेयकका रूपमा संशोधन विधेयकलाई लिन नहुने उनको तर्क छ । ‘विधेयक फेल भएकोमा सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, उनले भने । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले आफ्नो पार्टीले सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकता पाएकाले संसद्मा आउन प्राविधक कठिनाइ परेको बताए।
कांग्रेस नेता डा. प्रकाशरण महतले राजपासँगको सहकार्यले नै मतदान भएकाले उनीहरूले आगामी दिनमा राष्ट्रको मुद्दा अघि सार्दै असोज २ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब आन्दोनल होइन, सहमति र सहकार्यबाट प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा सबै संसदवादी शक्ति सहभागी हुने हो’, उनले भने ।
कांग्रेस – गीता वाग्ले, कविताकुमारी सरदारसहित -५ जना
एमाले – राज्यलक्ष्मी गोल्छा, नेजमा आलम, बलबहादुर महत, दिनेश यादवसहित – ६ जना
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) – आनन्दीदेवी पन्त, इस्तिहाक अहमद खान, गीता सिंह, दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे, रमेशकुमार लामा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), लक्ष्मी थापा पासवान, सरोज शर्मा, सुनलीबहादुर थापा, सीता लुइँटेल ज्ञवाली, शयन्द्र वान्तवा, विराज बिष्ट, वविना मोक्तान लावती, रेशमबहादुर लामा, रामकुमार सुब्बा धानो महरा सिरहा, कमलदादलेवी शर्मा -१८